420s Zaytoven &amp; Quavo फुट by प्रतियोगिता द्वारा जीनियस एक्स फल को विजेता निर्माता संग स्टूडियो हिट images and subtitles
यो के छ मानिस, यो जायटोभिन हो, र म यहाँबाट फलको विजेतालाई भेट्न आएको हुँ फुट र जीनियस स्टुडियो सत्र प्रतियोगिता। देश भर बाट निर्माताहरु फूट स्न्याक्स द्वारा फल द्वारा प्रेरित ध्वनिको प्रयोग गरी प्रस्तुत गरिएको बीटहरू। जाऔं यसलाई जाँच गर्नुहोस्। मस्ता फारो। तिमीलाई कस्तो छ म डेनभर, कोलोराडोको हुँ, जन्म र हुर्काएँ। डेन्भरमा संगीत दृश्य कस्तो छ? यो हो धेरै सानो त्यहाँ निश्चित रूपले धेरै संस्कृति छ। त्यसोभए तपाईं किन प्रवेश गर्नुभयो? फुट स्टुडियो सत्रहरू द्वारा फल। म पहिले नै पिटाई गर्दैछु ताकि मलाई लाग्छ यो मात्र हो तपाईंलाई पछाडि समात्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईंलाई थाहा छैन कि त्यहाँबाट उफ्रनु र ती लिनु अवसरहरू। हाई स्कूलमा हुँदा तपाइँ साथीहरू र सबै कुरा पाउनुभयो र त्यसपछि मनपराउनुभयो तिनीहरू संगीत गरिरहेका छन् त्यसैले यो उनीहरूको साथ यो जस्तै छ। हो, जो केहि हुन् मान्छे को तपाईं उत्पादन मा हेरे? म भन्छु कि डा। सम्भवतः तपाई एक नम्बर हुनुहुन्छ अवश्य। ओह, त्यो नगर्नुहोस्, कुनै फोरियलल फोरियलल छैन। त्यो के हो। Pharrell। म भन्छु Dre र Timbaland र सामान जस्तै म सुन्न को लागी थियो। डा। Dre Dre दिन I मेरो चचेरो भाईलाई याद गर्नुहोस्, उसले मेरो लागि यो खेलिरहेको थियो, मलाई यो सुन्न दिनुहोस् तपाईलाई थाहा छ, वाकम्यानमा। मलाई आवाज सुन्ने कारण सुन्न म यति आदीएको थिएँ र यो कस्तो महसुस भयो। त्यसैले म डाक्टर Dre मेरो पक्षमा छ भनिरहेछु किनभने म र्याप संगीतको लागि मेरो परिचय जस्तै थियो। त्यसोभए तपाईले के सुरू गर्नुभयो? ठिकै भए पनि म सबै लुपहरु मार्फत जाँदै थिएँ र सबै कुरा र त्यसपछि मैले यो साँच्चिकै मन पराउँछु: स्वाद मिक्सरहरू लुप टेम्पो र सबै कुरा यो सिर्फ मलाई यो हडबड भयो। र मैले त्यसलाई टेकेपछि मैले उही टेम्पो र सबै कुरा राखें। ल मैले भर्खरै त्यहाँबाट निर्माण गर्न सुरु गरें। केहि ताली र पासोहरू र सबै थोक। त्यसोभए त्यो चलिरहेको छ, त्यसैले म त्यहाँ केही टोपीहरू फालिदिन्छु र तपाईंलाई थाहा छ लात र सबै त्यसोभए जब तपाइँले यसमा थपेका छन् लगभग चित्रका लागि तपाईले ठीकै मन पराउनुभयो पिट धेरै धेरै भयो। हो, यो मेरो लागि प्रत्येक पटक गर्नुहोस्। हो जब हामी उनीहरूलाई पासो थप्छौं, कोठामा सबैजना ताली बजाउँछु ठीक छ यो अब छ। र तब यो त्यहि हो जहाँ म, म त्यस्तो सोचिरहेको थिएँ जुन तपाईंलाई थाहा छ सबैजना सायद एक ध्वनी प्रयोग गर्न सक्ने छ र म बिट स्विच गर्न चाहन्छु, म गर्छु जस्तो कि तपाईंलाई एउटा ट्र्याकमा तीनवटा गीतहरू छन्। एक मा। त्यसैले मैले फिगर गरेँ, तपाईलाई थाहा छ, यसलाई परिवर्तन गर्नु म बेरी टाई डाई लुपको साथ गयो। तपाईलाई थाहा छ मैले हराएको बिटमा फिट हुन मैले यसलाई छुटाएँ थियो र मैले यो पनि राखें। सहि म धेरै धेरै तत्वहरू परिवर्तन गर्न चाहन्न। त्यसैले मैले कुनै ड्रम वा 8०8 वा कुनै पनि परिवर्तन गरेन जुन मैले भर्खरै राखें त्यहाँ संग संगै संग। उस्तै ड्रमहरू हो। र त्यसपछि एउटा अन्तिम कुरा। यो मास्ता फारो ट्याग बिना मस्ता फारो हो। तपाईंले ट्याग राख्नु भयो। मस्ता को हो? त्यसोभए तपाईं कसरी आउनुभयो? मेरो मनपर्ने चलचित्र अन्तिम ड्र्यागन हो। म दुई दिन अघि अन्तिम ड्र्यागन हेर्दै जाँदैछु। मेरो मनपर्ने चलचित्र मास्टर को हो हो ठीक। त्यसैले त्यो धेरै धेरै। देखाउनुहोस् मैले कसैलाई सोचेको छु मैले निश्चित रूपमा अहिले यस थाल जाँच गर्न चाहान्छु। म हुँ मेरो bros को एक कल गर्नुहोस्। Huncho के भयो? के भइरहेको छ? कहाँ छाै? म स्टुडियोमा छु। मानिस तपाईलाई थाहा छ म ल्याबमा छु। ठीक छ, म यहाँ विजेता मानिस, मस्ता फारो संग बसिरहेको छु। के छ यार? के भयो भाई? के हुन्छ? उहाँ कडा जानुहुन्छ। तपाईं अब ठूलो कुकुर संग। मानिसलाई कदर गर्नुहोस्। होइन उसले भर्खरै यो बिट बनाए, म तपाईलाई जाँच गर्न चाहान्छु। यो गाह्रो हुन्छ, तथ्यको कुरा केही यस्तो लाग्दछ कि तपाईंले र्याप गर्नुहुनेछ। म अहिले स्टुडियोमा छु, मसँग खेल्नुहुन्न। यदि यो धेरै गाह्रो छ। निश्चित रूपमा पागल हो। होइन त्यो गाह्रो छ। त्यो चीज संस्कृति III बनाउन सक्छ। होइन हामी यसमा छौं। म यसलाई सँगै राख्न जाँदैछु। हो सर, मानिस। फुट स्टुडियो सत्र मानिस फलको लागि फल जितेकोमा बधाई छ। त्यो कदर गर्नुहोस्। म अब ठूलो कुकुर संग। जारी राख्नुहोस्, पीसिरहनुहोस्। ध्यान केन्द्रित रहनुहोस्। खाना पकाउनुहोस्। तपाईं बाटोमा हुनुहुन्छ। Igt Quay। पागल पनि वास्तविक लाग्दैन। कसरी एक उत्तम तरिका एक निर्माता को उद्योग मा दीर्घायु हुन सक्छ? को रूप मा निर्माता एक अद्वितीय शक्तिशाली ध्वनि भनेको के हो दीर्घायु। तपाईं सम्भवत दश उत्पादकहरूलाई यहाँ, यस कोठामा लाइन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको आँखा बन्द गर्नुहोस् र यी सबै बिभिन्न दस उत्पादकहरूको लागि पिट्न सुरु गर्नुहोस्। जसलाई Zaytoven धडकीन्छ को लागी तपाईं तुरुन्तै भन्न सक्नुहुन्छ कि व्यक्ति Zaytoven को हराएको छ। व्यक्तिहरू सोध्छन्: Dang Zaytoven मैले के गर्न भयो खेल मा प्राप्त गर्न? तिमीलाई थाहा छ मैले कुन कदमहरू चाल्नु पर्छ? "म सधैं भन्छु मान्छे तिमीले कलाकार पाउनु पर्छ। जस्तै यदि यो गुच्ची उड्नको लागि होइन भने जायोटोभन सायद एउटा ध्वनि जसको केही मतलब भएन। त्यसोभए, एक पटक तपाईंले एक जना कलाकार पाउनुभयो तपाईंलाई थाहा छ तपाईको रसायनशास्त्र र ध्वनि सँगै मिलेको छ, तपाईलाई एक पटक यो थाहा हुन्छ कि एक पटक वा एकचोटि मच्चियो त्यो कलाकार बन्द गर्न थाल्छ। त्यो कलाकार पनि चिनिन्छ निश्चित ध्वनि को लागी। यो ध्वनी हुनेछ कि तपाईंले सिर्जना गर्नु भयो। कुन कुराले तपाईंलाई हाम फाल्यो यस परियोजनाको लागि फूट स्टुडियो सत्रहरू? म सँधै तपाई जस्तै महसुस गर्छु थाहा छ म एक निर्माता हुँ कि अन्य उत्पादकहरु तपाईलाई हेर्ने हेर्छन्, र माथि हेर्नुहोस्, र म जहिले पनि म एक सल्लाहकार बन्न चाहान्छु जस्तै लाग्छ, तपाईलाई मेरो ज्ञान के हो, र थाँहा छ अप र आउने उत्पादकहरूलाई समर्थन देखाउनुहोस्। जस्तो म यहाँ छु मान्छे म हुन चाहान्छु तपाईं मलाई चिन्नुहुन्छ व्यक्तिहरूमा ठूलो भाई जुन यसलाई तपाईंको खेलमा बनाउने कोशिश गर्दैछ। कुनै पनि समय केहि जस्तो यो मान्छेसँगै आउँदछ, म निश्चित रूपमा तपाईलाई १००% थाहा छ। सुन्नुहोस् कि त्यहाँ एकदम डोप थियो, तपाईंले मलाई केही पिट्न चाहानुहुन्छको मुडमा हुनुभयो मानिस गरेको कुक गरौं। निश्चित रूपमा। केही कुरा गरौं। त्यसो गरौं।
Zaytoven &amp; Quavo फुट by प्रतियोगिता द्वारा जीनियस एक्स फल को विजेता निर्माता संग स्टूडियो हिट
< start="1.32" dur="3.18"> यो के छ मानिस, यो जायटोभिन हो, र म यहाँबाट फलको विजेतालाई भेट्न आएको हुँ >
< start="4.5" dur="3.87"> फुट र जीनियस स्टुडियो सत्र प्रतियोगिता। देश भर बाट निर्माताहरु >
< start="8.37" dur="5.25"> फूट स्न्याक्स द्वारा फल द्वारा प्रेरित ध्वनिको प्रयोग गरी प्रस्तुत गरिएको बीटहरू। जाऔं >
< start="13.62" dur="1.54"> यसलाई जाँच गर्नुहोस्। >
< start="25.14" dur="2"> मस्ता फारो। तिमीलाई कस्तो छ >
< start="30.74" dur="3.9"> म डेनभर, कोलोराडोको हुँ, जन्म र हुर्काएँ। डेन्भरमा संगीत दृश्य कस्तो छ? यो हो >
< start="34.649" dur="4.441"> धेरै सानो त्यहाँ निश्चित रूपले धेरै संस्कृति छ। त्यसोभए तपाईं किन प्रवेश गर्नुभयो? >
< start="39.09" dur="5.1"> फुट स्टुडियो सत्रहरू द्वारा फल। म पहिले नै पिटाई गर्दैछु ताकि मलाई लाग्छ यो मात्र हो >
< start="44.19" dur="3.15"> तपाईंलाई पछाडि समात्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईंलाई थाहा छैन कि त्यहाँबाट उफ्रनु र ती लिनु >
< start="47.34" dur="4.14"> अवसरहरू। हाई स्कूलमा हुँदा तपाइँ साथीहरू र सबै कुरा पाउनुभयो र त्यसपछि मनपराउनुभयो >
< start="51.48" dur="3.719"> तिनीहरू संगीत गरिरहेका छन् त्यसैले यो उनीहरूको साथ यो जस्तै छ। हो, जो केहि हुन् >
< start="55.199" dur="5.25"> मान्छे को तपाईं उत्पादन मा हेरे? म भन्छु कि डा। सम्भवतः तपाई एक नम्बर हुनुहुन्छ >
< start="60.449" dur="7.831"> अवश्य। ओह, त्यो नगर्नुहोस्, कुनै फोरियलल फोरियलल छैन। त्यो के हो। Pharrell। म भन्छु >
< start="68.28" dur="4.17"> Dre र Timbaland र सामान जस्तै म सुन्न को लागी थियो। डा। Dre Dre दिन I >
< start="72.45" dur="3.989"> मेरो चचेरो भाईलाई याद गर्नुहोस्, उसले मेरो लागि यो खेलिरहेको थियो, मलाई यो सुन्न दिनुहोस् तपाईलाई थाहा छ, वाकम्यानमा। >
< start="76.439" dur="4.11"> मलाई आवाज सुन्ने कारण सुन्न म यति आदीएको थिएँ >
< start="80.549" dur="3.36"> र यो कस्तो महसुस भयो। त्यसैले म डाक्टर Dre मेरो पक्षमा छ भनिरहेछु किनभने म >
< start="83.909" dur="2.151"> र्याप संगीतको लागि मेरो परिचय जस्तै थियो। >
< start="97.04" dur="2.759"> त्यसोभए तपाईले के सुरू गर्नुभयो? ठिकै भए पनि म सबै लुपहरु मार्फत जाँदै थिएँ र >
< start="99.8" dur="3.36"> सबै कुरा र त्यसपछि मैले यो साँच्चिकै मन पराउँछु: स्वाद मिक्सरहरू >
< start="103.16" dur="1.08"> लुप >
< start="112.66" dur="2.26"> टेम्पो र सबै कुरा यो सिर्फ मलाई यो हडबड भयो। >
< start="114.92" dur="3.34"> र मैले त्यसलाई टेकेपछि मैले उही टेम्पो र सबै कुरा राखें। ल >
< start="122.2" dur="4.92"> मैले भर्खरै त्यहाँबाट निर्माण गर्न सुरु गरें। केहि ताली र पासोहरू र सबै थोक। >
< start="133.52" dur="3.719"> त्यसोभए त्यो चलिरहेको छ, त्यसैले म त्यहाँ केही टोपीहरू फालिदिन्छु र तपाईंलाई थाहा छ लात र >
< start="137.24" dur="1.32"> सबै >
< start="144.62" dur="2.759"> त्यसोभए जब तपाइँले यसमा थपेका छन् लगभग चित्रका लागि तपाईले ठीकै मन पराउनुभयो >
< start="147.379" dur="3.06"> पिट धेरै धेरै भयो। हो, यो मेरो लागि प्रत्येक पटक गर्नुहोस्। हो >
< start="150.439" dur="3.33"> जब हामी उनीहरूलाई पासो थप्छौं, कोठामा सबैजना ताली बजाउँछु ठीक छ >
< start="153.769" dur="3.741"> यो अब छ। र तब यो त्यहि हो जहाँ म, म त्यस्तो सोचिरहेको थिएँ जुन तपाईंलाई थाहा छ >
< start="157.51" dur="4.42"> सबैजना सायद एक ध्वनी प्रयोग गर्न सक्ने छ र म बिट स्विच गर्न चाहन्छु, म गर्छु >
< start="161.93" dur="6.01"> जस्तो कि तपाईंलाई एउटा ट्र्याकमा तीनवटा गीतहरू छन्। एक मा। त्यसैले मैले फिगर गरेँ, तपाईलाई थाहा छ, यसलाई परिवर्तन गर्नु म >
< start="167.96" dur="3"> बेरी टाई डाई लुपको साथ गयो। >
< start="178.52" dur="2"> तपाईलाई थाहा छ मैले हराएको बिटमा फिट हुन मैले यसलाई छुटाएँ >
< start="180.52" dur="3.2"> थियो र मैले यो पनि राखें। सहि >
< start="189.04" dur="4.5"> म धेरै धेरै तत्वहरू परिवर्तन गर्न चाहन्न। त्यसैले मैले कुनै ड्रम वा 8०8 वा कुनै पनि परिवर्तन गरेन जुन मैले भर्खरै राखें >
< start="193.54" dur="3.62"> त्यहाँ संग संगै संग। उस्तै ड्रमहरू हो। >
< start="204.86" dur="4.34"> र त्यसपछि एउटा अन्तिम कुरा। यो मास्ता फारो ट्याग बिना मस्ता फारो हो। >
< start="209.2" dur="1.42"> तपाईंले ट्याग राख्नु भयो। >
< start="213.1" dur="5.22"> मस्ता को हो? त्यसोभए तपाईं कसरी आउनुभयो? मेरो मनपर्ने चलचित्र अन्तिम ड्र्यागन हो। >
< start="218.329" dur="3.181"> म दुई दिन अघि अन्तिम ड्र्यागन हेर्दै जाँदैछु। मेरो मनपर्ने चलचित्र >
< start="221.51" dur="3.87"> मास्टर को हो हो ठीक। त्यसैले त्यो धेरै धेरै। देखाउनुहोस् >
< start="233.7" dur="3.899"> मैले कसैलाई सोचेको छु मैले निश्चित रूपमा अहिले यस थाल जाँच गर्न चाहान्छु। म हुँ >
< start="237.6" dur="1.44"> मेरो bros को एक कल गर्नुहोस्। >
< start="242.34" dur="3.16"> Huncho के भयो? के भइरहेको छ? कहाँ छाै? >
< start="245.5" dur="2"> म स्टुडियोमा छु। मानिस तपाईलाई थाहा छ म ल्याबमा छु। >
< start="248.04" dur="3.92"> ठीक छ, म यहाँ विजेता मानिस, मस्ता फारो संग बसिरहेको छु। के छ यार? के भयो भाई? >
< start="251.96" dur="2"> के हुन्छ? उहाँ कडा जानुहुन्छ। >
< start="253.96" dur="3.76"> तपाईं अब ठूलो कुकुर संग। मानिसलाई कदर गर्नुहोस्। >
< start="259.02" dur="3.7"> होइन उसले भर्खरै यो बिट बनाए, म तपाईलाई जाँच गर्न चाहान्छु। यो गाह्रो हुन्छ, तथ्यको कुरा केही यस्तो लाग्दछ कि तपाईंले र्याप गर्नुहुनेछ। >
< start="262.72" dur="3.24"> म अहिले स्टुडियोमा छु, मसँग खेल्नुहुन्न। यदि यो धेरै गाह्रो छ। >
< start="282.22" dur="7.58"> निश्चित रूपमा पागल हो। होइन त्यो गाह्रो छ। त्यो चीज संस्कृति III बनाउन सक्छ। >
< start="292" dur="2.98"> होइन हामी यसमा छौं। म यसलाई सँगै राख्न जाँदैछु। >
< start="294.98" dur="4.44"> हो सर, मानिस। फुट स्टुडियो सत्र मानिस फलको लागि फल जितेकोमा बधाई छ। >
< start="299.42" dur="3.74"> त्यो कदर गर्नुहोस्। म अब ठूलो कुकुर संग। जारी राख्नुहोस्, पीसिरहनुहोस्। >
< start="303.16" dur="3.8"> ध्यान केन्द्रित रहनुहोस्। खाना पकाउनुहोस्। तपाईं बाटोमा हुनुहुन्छ। >
< start="307.88" dur="4.14"> Igt Quay। पागल पनि वास्तविक लाग्दैन। >
< start="318.4" dur="3.28"> कसरी एक उत्तम तरिका एक निर्माता को उद्योग मा दीर्घायु हुन सक्छ? को रूप मा >
< start="321.82" dur="4.71"> निर्माता एक अद्वितीय शक्तिशाली ध्वनि भनेको के हो दीर्घायु। >
< start="326.53" dur="4.11"> तपाईं सम्भवत दश उत्पादकहरूलाई यहाँ, यस कोठामा लाइन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको आँखा बन्द गर्नुहोस् >
< start="330.64" dur="4.35"> र यी सबै बिभिन्न दस उत्पादकहरूको लागि पिट्न सुरु गर्नुहोस्। जसलाई >
< start="334.99" dur="3.87"> Zaytoven धडकीन्छ को लागी तपाईं तुरुन्तै भन्न सक्नुहुन्छ कि व्यक्ति Zaytoven को हराएको छ। >
< start="338.86" dur="3.09"> व्यक्तिहरू सोध्छन्: Dang Zaytoven मैले के गर्न भयो >
< start="341.95" dur="4.14"> खेल मा प्राप्त गर्न? तिमीलाई थाहा छ मैले कुन कदमहरू चाल्नु पर्छ? "म सधैं भन्छु मान्छे >
< start="346.09" dur="3.57"> तिमीले कलाकार पाउनु पर्छ। जस्तै यदि यो गुच्ची उड्नको लागि होइन भने जायोटोभन >
< start="349.66" dur="4.65"> सायद एउटा ध्वनि जसको केही मतलब भएन। त्यसोभए, एक पटक तपाईंले एक जना कलाकार पाउनुभयो >
< start="354.31" dur="4.23"> तपाईंलाई थाहा छ तपाईको रसायनशास्त्र र ध्वनि सँगै मिलेको छ, तपाईलाई एक पटक यो थाहा हुन्छ कि एक पटक वा एकचोटि मच्चियो >
< start="358.54" dur="3.33"> त्यो कलाकार बन्द गर्न थाल्छ। त्यो कलाकार पनि चिनिन्छ >
< start="361.87" dur="3.72"> निश्चित ध्वनि को लागी। यो ध्वनी हुनेछ कि तपाईंले सिर्जना गर्नु भयो। कुन कुराले तपाईंलाई हाम फाल्यो >
< start="365.59" dur="3.54"> यस परियोजनाको लागि फूट स्टुडियो सत्रहरू? म सँधै तपाई जस्तै महसुस गर्छु >
< start="369.13" dur="3.539"> थाहा छ म एक निर्माता हुँ कि अन्य उत्पादकहरु तपाईलाई हेर्ने हेर्छन्, र >
< start="372.669" dur="5.671"> माथि हेर्नुहोस्, र म जहिले पनि म एक सल्लाहकार बन्न चाहान्छु जस्तै लाग्छ, तपाईलाई मेरो ज्ञान के हो, र थाँहा छ >
< start="378.34" dur="4.38"> अप र आउने उत्पादकहरूलाई समर्थन देखाउनुहोस्। जस्तो म यहाँ छु मान्छे म हुन चाहान्छु तपाईं मलाई चिन्नुहुन्छ >
< start="382.72" dur="4.59"> व्यक्तिहरूमा ठूलो भाई जुन यसलाई तपाईंको खेलमा बनाउने कोशिश गर्दैछ। कुनै पनि समय केहि >
< start="387.31" dur="3.83"> जस्तो यो मान्छेसँगै आउँदछ, म निश्चित रूपमा तपाईलाई १००% थाहा छ। >
< start="391.14" dur="4.22"> सुन्नुहोस् कि त्यहाँ एकदम डोप थियो, तपाईंले मलाई केही पिट्न चाहानुहुन्छको मुडमा हुनुभयो >
< start="395.36" dur="5.72"> मानिस गरेको कुक गरौं। निश्चित रूपमा। केही कुरा गरौं। त्यसो गरौं। >